The Ab Presents Nepal » चीनबाट फर्केका विद्यार्थी भन्छन्: ओली सरकारले हम्म्रालागि निकै राम्रो व्यवस्था गरेको रहेछ यो माहान काम एक सेयर गर्दिनुहोस !
चीनबाट फर्केका विद्यार्थी भन्छन्: ओली सरकारले हम्म्रालागि निकै राम्रो व्यवस्था गरेको रहेछ यो माहान काम एक सेयर गर्दिनुहोस !
काठमाडौं, फागुन ४ -: कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट उद्धार गरी आइतबार बिहानै काठमाडौं ल्याइएका १ सय ७५ नेपालीलाई अहिले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले नेपाल सरकारले आफूहरूले सोचेभन्दा राम्रो व्यवस्था गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।
हामी समस्याबाट नै आएका हौं। सरकारले जे जति गरेको छ। हाम्रो अपेक्षाभन्दा राम्रो गरेको छ,क्वारेन्टाइनमा रहेका पीएचडीका विधार्थी अशोक साहले आइतबार बिहान नेपालखबरसँग भने,साबुन, पानी , बेड, चप्पलहरु सबै अलग अलग छ। दिइएको छ। हामी व्यवस्थापनबाट सन्तुष्ट छौं।
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको हुबेई प्रान्तबाट शनिबार राति नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीमार्फत उनीहरूलाई स्वदेश ल्याइएको हो।आइतबार बिहान ४ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका उनीहरूलाई त्यहीं स्वास्थ्य जाँच गरेपछि मात्रै ६ वटा बसमा राखेर खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा पुर्याइएको हो।कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षण १४ दिनमा देखिने भएकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन अर्थात् परिवारलगायत अन्य स्वस्थ मानिसको सम्पर्कबाट टाढा सुरक्षित स्थलमा राखिएको हो।
क्वारेन्टाइनमा विभिन्न चार वार्डमा चीनबाट ल्याइएका नेपालीहरु राखिएको छ। उनीहरुलाई बिहानको खाजा दिइसकिएको छ। एक कोठामा तीन बेड राखिएका छन्। एकअर्कासँग बोल्न दिइएको छ तर बाहिर ननिस्कन भनिएको साहले बताए। एयरपोर्टबाट बिहान बसमा चढाउँदा सबैको स्वास्थ्य जाँच गरिदा सामान्य देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा उनीहरुको थप चेकजाँच भएन।
तर, बेला बेला चिकित्सकहरु आइरहने र केही समस्या भए तत्काल खबर गर्न भनेको साहले बताए। दैनिक कार्यतालिका भने अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन। साँझसम्म विस्तृतमा थाहा हुने उनी बताउँछन्।इन्टरनेटको सुबिधाले साथीभाई, परिवारसँग कुरा गर्न तथा अध्ययनमा सजिलो भएको उनी बताउँछन्।
‘यहाँ वाइफाइ पनि छ। यसले साथी, परिवारसँग तथा चीनमा प्राफेसरहरुसँग कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, उनले थपे, ‘चीनमा हामी मोबाइलको सिम नै फालिदिन्थ्यौं। नेट मै काम हुन्छ। नेपालमा डाटा पनि महँगो छ। आज बिहानमात्रै ४० रुपैयाँमा दुई सय एमबी लिएको, सबै सकिसक्यो। त्यसैले मैले इन्टरनेटमा बढि जोड दिएको थियो।क्वारेन्टाइनमा रहेका अर्का विधार्थी चन्द्रभुषण यादवले इन्टरनेट निकै स्लो भएकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे।